Dzorera Nzira vs 250ok: Email Kuendesa Software uye Services | Martech Zone
Dzorera Nzira vs 250ok: Email Kuendesa Software uye Services
Chipiri, August 16, 2016 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Nei email kuendesa zvine basa? Zvinoenderana ne 2015 Email Dhata Yemhando Trends Chirevo naRuzivo, 73% yevatengesi vanotaura kuti vane nyaya nekutumirwa neemail. Return Path ane Zvinonzi kuti pamusoro pe20% yeemail yepamutemo inoshaikwa. Pasina mubvunzo, mabhizinesi anosangana nezvinetso nekuendesa, uye izvo zvinokanganisa zvisizvo mutsara wepasi.
Kwemakore, Dzorerai Nzira anga ari iye anotungamira indasitiri munzvimbo yekutumira email pasina zvakawanda, kana zviripo, makwikwi. Nekusvika kwe 250ok, uye chigaro chevatengi chinosanganisira makambani seAdobe, Marketo, uye Act-On, iyo indasitiri pakupedzisira ine zviri pamutemo imwe nzira yekuDzorera Nzira yekuendesa software uye zvehunyanzvi masevhisi.
Saina Chikumbiro Chekushanya
Kana tichienzanisa Return Path uye 250ok, misoro mitatu inowanzouya - Certification, Email Panel Dhata, uye Nyanzvi Services.
Dzorera Nzira Certification
Certification chave Chidzosera Path chingwa uye bota kwemakore. Zvinoenderana neyaimbova mutengi pamhepo, yaimbove yakakosha kurema kwayo mugoridhe. Nhasi, Certification hwaro hunoratidzika kunge hwakavakirwa paemail vatengesi vanogadzirisa avo eemail zvirongwa nemaitiro akanakisa. Mushure mekusangana neiyo yekutanga muyero, vatengi vanodikanwa kuti varambe vachigara mukati meaya metric panguva yese yaVanozivikanwa. Kusadaro, sezvaungatarisira, zvinoguma nematambudziko ekuendesa.
Kune avo vatengi vanogara mukati memetriki, ivo vanovimbiswa yakagadziridzwa kuendesa email kuAOL, Yahoo, Microsoft, Comcast, Cox, Cloudmark, Yandex, Mail.ru, Orange, SpamAssassin, uye SpamCop.
Nekudaro, iyo Global Dhirivhendi Director kuOracle, Kevin Senne, akataura kuti vaive nemuenzaniso wevateereri Certification vatengi vanezvinhu zvekuendesa pamwe nevamwe vevashambadziro internet service provider (ISP) vadyidzani. Zvingave zvinonakidza kuziva kuti kangani kuvharika kune ISP vanobatana kunoitika kune vanoenderana vatengi, uye kuti zvinoitika sei.
Zvinoenderana neKudzoka Path, Gmail inowanzoita hafu yezvinyorwa zvakawanda, saka Certification haipe kusimudzira kwehunyanzvi ipapo. Ivo vanotaura kuti Certification vatengi vanoita zvirinani kuGmail pane avo vasina-Certified vanotumira, chimwe chinhu chavanoti kune akanakisa maitiro zviyero zvavanoda vatengi kutevedzera. Nhau dzakanaka apa pane chero munhu anogona kutevedzera akanakisa maitiro pasina kubhadhara peni kune chero mutengesi, asi iwe unoda turu yekushandisa kuongorora chirongwa chako.
Saka, mubvunzo mukuru kune Certification vatengi ndewe zvakadii zvekubudirira kwavo kwekubuditsa kunobva pakuva mutumwa anotungamira maringe nekusimudzwa kwehunyanzvi kuri kupihwa kune vanobatsirana neIP. Kune avo varipo Certification vatengi, kumhanya padivi-ne-padivi bvunzo kwaizoratidza kuti yakawanda sei yavo yekusimudza kubva pakutevera akanakisa maitiro maringe neyekubhadhara-kwe-kutamba kusimudzira kwavanowana kuburikidza neChipatimendi's ISP vadyidzani. Zvinotora kumwe kuyedza kuyedza, asi vatengesi vanofambiswa nedata vanoziva kuti kuyera ndiyo kiyi yekubudirira.
250ok haina kupa Certification. Maitiro avo akavakirwa pakutevera akanakisa maitiro, senge Return Path, asi pachinzvimbo chekubhadhara-kutamba-modhi, ivo vanopa simba vanotumira vane chaiyo-nguva data kuti vabudirire kuronga kwavo chirongwa uye kuzadzisa yakasimba mutumwa mukurumbira.
Dzosera Path Email Panel Dhata
Return Path inoshandisa email yepaneru dhata inosanganisirwa nemazita embeu kuyera kuendesa, nepo 250ok inoshandisa zvinyorwa zvembeu uye data rekugamuchira.
Imwe ingangoita nyaya nedhijitari data ndeyekuti mapaneruji vanoziva yavo data riri kucherwa uye kutengeswazve. Vakapa mvumo here? Kana zvisiri, izvozvo zvinoshanda kune rako hodhi? Zvekare, ini handizive mabviro epaneru yekuDzorera nzira uye kana vashandisi vakabvuma kutora chikamu, saka ndokumbira utarise navo.
Saiye mushambadzi, ini ndinoda iyo inowona panhare dhata inogona kupa. Asi mune kesi yeDzorera nzira yedhijitari data, ivo ripoti kuti chete 24% yeavo mapaneru vanoshandisa iyo account seye yavo yekutanga email account.
Paunenge uchibata nedata repaneru chero rorudzi, zvakakodzera kubvunza mutengesi kana iro jenare rakapedzisira kuvandudzwa. Survivor Bias inyaya yausingade kusevha mupaneru rako. Zvekare, tarisa neKudzoka Nzira.
Kana zviri zvekuiswa kweinbox, dambudziko rinowanzo dhata repaneru rinoratidza risingasvike zana muzana kuiswa mubhokisi kuAptlook neGmail nekuda kwekusefa neumwe munhu mushandisi. Nekuda kweizvozvo, vanotumira vanogona kusiiwa vachishamisika kana inbox yekuisa gomba iri kukonzerwa nemushandisi-nhanho yekusefa kana kana paine dambudziko chairo rekuendesa.
250ok haishandisi email yepaneru data. Maonero avo kuti data rinoitika riri mukati meiyo data rekubata iwe yaunogona kuwedzera kuburikidza ne250ok's Email Informant, iyo inopa yakadzama, mushandisi-chikamu chiitiko data, kuwedzera kune iyo analytics inopihwa neako email sevhisi (ESP). Ndiwo mubatanidzwa wezvishandiso izvi zvinokupa iyo yakazara kwazvo email ungwaru huripo.
Dzosera Path uye 250ok Professional Services
Makambani ese ari maviri anopa kubvunzana kwekuendesa kune vatengi. Musiyano mukuru: Return Path yakavaka timu yemukati yevanopa mazano, nepo 250ok asarudza kudyidzana nemasangano ekunze ekuendesa.
Zvisinei kana iwe uri kufunga Kudzoka Nzira kana 250ok, zvakakosha kuti ubvunze mibvunzo yakaoma yeanobvunza iyo ichave iri kutonga account yako. Kwandiri, hazvina basa kana ndiri kubata nemubatsiri wemba kana mubatsiri wevashandi. Iwe unoda mumwe munhu ane makore, kwete mwedzi, ane ruzivo, uye ivo vanoda hukama kune makuru maIPs muchiitiko kugadzirisa kunodiwa. Kumbira kutangazve uye zvevatengi mareferensi eanobvunza uyo anozove wako poindi munhu. Kubatika nemubatsiri wejunior ari kuverenga kubva muchinyorwa kunogona kukonzera dambudziko guru kuchirongwa chako.
Kurumidza kuongorora kweiyo 250ok chikwiriro
kubva 250ok ndiyo ipuratifomu nyowani pachiitiko, ini ndaida kukurumidza kuvhara ma module avo: Mbiri Informant, Inbox Informant, Email Informant, Dhizaini Informant, uye DMARC. Paunenge uchishandisa ese mana ma module mumakonzati, vatengesi vane seti yakazara yezvirwiriso maturusi kubva kwavanotungamira zvirongwa zvavo.
Mukurumbira Informant - Mbiri Informant inosanganisira akasiyana maficha anoongorora yako email mukurumbira.
Chimwe chezvinhu zvinozivikanwa kwazvo zve 250ok Mhinduro ndeyavo spam musungo netiweki angangoita makumi matatu emamiriyoni domains. Kuwanika kune iyi data hakuna-brainer kune vatengesi veemail. Kukura uye mhando yeiyo spam musungo network, uye granular kupinda kune iyo chaiyo-nguva dhata (semuenzaniso, musungo unorova nezuva, IP, duraini, wenyaya mutsara, nyika), inokwezva zvakanyanya kwandiri semutumi. Iko kusarongeka kuongorora? Iyi data inowanikwa mune chaiyo-nguva, uye iwe unogona kuseta zvakagadziriswa zviyeuchidzo kuti utarise pane zvinyorwa zvinokunetsa iwe zvakanyanya. Ini ndinoda kusanduka mukugadzirisa kuti ndiani anowana yambiro uye kuti yambiro yacho inopihwa sei (semuenzaniso, email, SMS).
DMARC Dashibhodhi - Tichifunga kukura kwekuratidzira kwe spam uye kuita kwekubiridzira, uye mhinduro yeGmail yapfuura, yaive danho rakanaka re 250ok kuwedzera dhibhodhi yeDMARC. Iwe unogona kushandisa iyo "yekucherechedza maitiro" uye software ichaongorora kutevedzera uye nekururamisa chiito chekugadzirisa, icho chinozopedzisira chakutungamira iwe kuenda kune wega wega kana kuramba mutemo. Chigadzirwa chinosanganisira kutyisidzira mepu, forensic kuzivisa, uye kuteedzera zvibodzwa.
250ok inopa kugona kuisa yako mhinduro loop loop (FBL). Kuziva kana munhu anonyunyuta achinyunyuta pamusoro pako kuchikosha, sezvo kumhanya kwemhinduro yako kuri chinhu chikuru mukuchengetedza vatapi veinternet service (ISPs) kuti varege kudzika zvakanyanya pane mukurumbira wako.
Uyewo, 250ok yakabatanidza Microsoft Smart Network Dhata Services (SNDS) uye Signal Spam kupinda iri nyore-kugaya UI. Ruzivo urwu runosvika kubva kuMicrosoft semurwi wakashata, usina kurongedzwa wedata mbishi, uye vamwe vatengesi vakaita zvishoma zvishoma kusimudzira ruzivo rwekushandisa iyo data. 250ok abuda munzira yavo kuti zviite nyore.
Inbox Informant - Vashambadziri vanoda zvigadzirwa zvemazuva ano zvekuvabatsira kumhara mubhokisi rezvinyorwa. Inbox Informant inokuratidza kuti yakawanda sei tsamba yako yakaiswa muinbox, spam, uye kuti yakawanda sei yakashaikwa. Iwe unogona kutyora yakatarwa email kuendesa nyaya nemushandirapamwe, izvo zvinobatsira kwazvo.
Imwe yemakakatanwa akakosha andakaona pakati 250ok uye Return Path ndeye 250ok's seedlist chinopihwa. Usati wabatwa mukuenzanisa kufukidza, iyo chete mbeu yakakosha ndeye kune vanopa mabhokisi ema mail kwaunotumira tsamba. Nguva. 250ok yakavaka seedlist optimizer chishandiso kukubatsira iwe laser mukati pane maSevhisi izvo zvine basa. Pakazara, pane misiyano mishoma mune yekudyarwa kwembeu nemakambani ese ari maviri ane imwe mbeu yakasarudzika, asi pane parody yayo kune angangoita ese makuru ekugamuchira. Makambani maviri aya anogona kunge aine zvaunoda kana achazviwana.
Email Informant - Munyika inotungamirwa nedata, yakavhurika uye maCTR haataure nyaya izere. Kuburitsa 250ok yekutevera pixel ine Email Informant inokuudza kuti ndevapi vanyoreri vanoverenga meseji uye kwenguva yakareba sei, uye rudzii rwechigadzirwa uye nehurongwa hwekushandisa hwavaishandisa.
Ndeapi ma link kana maCTA akaita zvakanakisa? Uri kugadzirisa nguva dzekutumira here? Email Informant inobatsira iwe kuti unzwisise zviri kushanda uye zvisiri izvo kuti iwe ugone kuita nekungwara, nekukurumidza sarudzo.
Dhizaina Informant - Wese mutengesi weemail anoda kuita imwe pre-ndege kuongororwa kutenderera dhizaini, saka 250ok ine kunze-kwe-kwe-bhokisi kusangana pamwe nekutungamira kunopa vatengesi Email pane Acid uye Litmus.
Dhizaini Informant inoedza yako yekugadzira maringe neakajairwa spam mafirita anosanganisira Barracuda, Symantec, Spam Assassin, Outlook, uye zvimwe zvakawanda kuti ugone kuona nekugadzirisa zvinokanganisa spam usati waendesa mushandirapamwe wako.
Ini ndinofunga kuva nevaviri vakafanana asi vatengesi vakati siyanei munzvimbo yekuendesa email chinhu chakanakira indasitiri. Kana iwe uri kutsvaga software yekuendesa, kusanganisira maDMARC maturusi, kana mabasa ekubvunza, ini ndinokurudzira kuti ubate Return Path uye 250ok yedemo, uye enzanisa wega.
Ndatenda nekuverenga uye kana uine mhinduro pane chero Inodzoka Nzira kana 250ok zvigadzirwa, ndapota inzwa wakasununguka kugovana iyo ruzivo neni, kana kupindura pazasi.
Kuzivisa: Oracle chiratidzo chakanyoreswa cheOracle Corporation uye / kana vanobatana navo. Return Path chiratidzo chakanyoreswa che Return Return, Inc. 250ok chiratidzo chakanyoreswa che 250OK LLC. 250ok Ndivatsigiri vesaiti yedu uye ini ndiri shamwari yakanaka yemuvambi Greg Kraios.
Tags: AndroidAndroid 2.3Android 2.3 email yekutarisaAndroid 2.3 email yekutarisa bvunzoAndroid 4.2Android 4.2 email yekutarisaAndroid 4.2 email yekutarisa bvunzoAndroid email yekutarisaAndroid email yekutarisa bvunzoAOL MailAOL tsamba ChromeAOL kutumira tsamba Chrome emailAOL mail Chrome email yekutarisa bvunzoAOL Mail email yekutarisaAOL Mail email yekutarisa bvunzoAOL Mail Internet ExplorerAOL Mail Internet Explorer email yekutarisaAOL Mail Internet Explorer email yekutarisa bvunzoApple Tsamba 6Apple Mail 6 yekutarisa emailApple Mail 6 email yekutarisa bvunzoBlackBerry 4 OSBlackBerry 4 OS email yekutarisaBlackBerry 4 OS email yekutarisa bvunzoBlackBerry 5 OSBlackBerry 5 OS email yekutarisaBlackBerry 5 OS email yekutarisa bvunzoblacklist informantRuvara HupofuRuvara Blindness email yekutarisaRuvara Blindness email yekutarisa bvunzokuburitswaDMARCemail ichivhariraemail kuburitswaemail design designemail inozivisaemail paneli dataemail mukurumbiraGmailGmail AppOngororo yeemail yeApple yeGmailGmail App email yekuongorora bvunzoGmail ChromeKuongorora kweGmail Chrome emailGmail Chrome email yekutarisa bvunzoGmail FirefoxOngorora email yeFirefox yeemailGmail Firefox email yekuongorora bvunzoGmail Internet ExplorerKutarisa email yeGoogle Internet ExplorerGmail Internet Explorer email yekuongorora bvunzoGreg kraioskuongorora kweinboxinbox inozivisainbox kuiswaiPadiPad email yekutarisaiPad email yekutarisa bvunzoipad miniiPad Mini email yekutarisaiPad Mini email yekutarisa bvunzoiPad-RetinaiPad Retina email yekutarisaiPad Retina email yekutarisa bvunzoiPhone 4siPhone 4s email yekutarisaiPhone 4s email yekutarisa bvunzoiPhone 5iPhone 5 email yekutarisaiPhone 5 email yekutarisa bvunzoiPhone 5siPhone 5s email yekutarisaiPhone 5s email yekutarisa bvunzoiPhone 6iPhone 6 email yekutarisaiPhone 6 email yekutarisa bvunzoiPhone 6 PlusiPhone 6 Plus email yekutarisaiPhone 6 Plus email yekutarisa bvunzoisp kuturikaisp email kuedzwalitmusLotus manotsi 6.5Lotus Notes 6.5 email yekutarisaLotus manotsi 6.5 email yekutarisa bvunzoLotus manotsi 7Lotus Notes 7 email yekutarisaLotus manotsi 7 email yekutarisa bvunzoLotus manotsi 8Lotus Notes 8 email yekutarisaLotus manotsi 8 email yekutarisa bvunzoLotus manotsi 8.5Lotus Notes 8.5 email yekutarisaLotus manotsi 8.5 email yekutarisa bvunzoMAC OS XMAC OS X email yekutarisaMAC OS X email yekutarisa bvunzoMICROSOFT MAHwindoMICROSOFT WINDOWS email yekutarisaMICROSOFT WINDOWS email yekutarisa bvunzoOutlook 2000Outlook 2000 email yekutarisaOutlook 2000 email yekutarisa bvunzoOutlook 2002Outlook 2002 email yekutarisaOutlook 2002 email yekutarisa bvunzoOutlook 2003Outlook 2003 email yekutarisaOutlook 2003 email yekutarisa bvunzoOutlook 2007Outlook 2007 email yekutarisaOutlook 2007 email yekutarisa bvunzoOutlook 2010Outlook 2010 email yekutarisaOutlook 2010 email yekutarisa bvunzoOutlook 2011Outlook 2011 email yekutarisaOutlook 2011 email yekutarisa bvunzoOutlook 2013Outlook 2013 email yekutarisaOutlook 2013 email yekutarisa bvunzoOutlook.com (Firefox)Outlook.com (Firefox) yekutarisa emailOutlook.com (Firefox) email yekutarisa bvunzoOutlook.com ChromeOutlook.com Chrome yekutarisa emailOutlook.com Chrome email yekutarisa bvunzoOutlook.com Internet ExplorerOutlook.com Internet Explorer email yekutarisaOutlook.com Internet Explorer email yekutarisa bvunzoRugwaro RakajekaPlain Chinyorwa email previewPlain Chinyorwa email yekutarisa bvunzomukurumbira informantdzoka nziradzoka nzira imwedzoka nzira chitupaspam musungospam musungo networkzvinokonzera spamThunderbird ichangoburwa WEB-BASEDThunderbird yazvino WEB-BASED email yekutarisaThunderbird yazvino WEB-BASED email preview bvunzoWindows Phone 8Windows Foni 8 email yekutarisaWindows Foni 8 email yekutarisa bvunzoYahoo! Tumira ChromeYahoo! Tumira tsamba yeemail ChromeYahoo! Tumira tsamba yeemail Chrome yekutarisaYahoo! Tumira FirefoxYahoo! Tumira tsamba yekutumira email yeFirefoxYahoo! Tumira tsamba yekutarisa email yeFirefoxYahoo! Tumira Internet Internet ExplorerYahoo! Tumira email Internet Explorer email kuongororaYahoo! Tumira email Internet Explorer email yekutarisa bvunzo
Chii chinonzi Google RankBrain?
3 B2B Maitiro Ekutengesa Anotarisirwa Newe Rongedzero Yako Nhasi
Gumiguru 7, 2014 na2: 35 PM
Maturusi matsva ekushambadzira eemail, ndinofunga vanhu vanozoshamiswa neemail kana vangowana kuwana data riri nani.
A serious data science
Aug 16, 2016 na10:47 PM
Zvakanaka izvo zvakangouraya kuve kwechokwadi kwechinyorwa ichi "250ok vanotsigira saiti yedu uye ndiri shamwari yepamoyo yemuvambi Greg Kraios"
Aug 17, 2016 pa 10: 02 AM
Hongu, ndiri shamwari naGreg uyo aive nechiratidzo ichi makore gumi apfuura uye zvino anokwikwidza nekambani hombe ine matani ezviwanikwa zvekushambadzira. Ndinodada kubatsira kuparadzira shoko pamhinduro yake inoshamisa. Uye ini ndinotenda zvikuru nevatsigiri vedu vanotsigira saiti ino uye vanondibatsira kupa rumwe ruzivo kuvaverengi vedu. Zvakaburitswa zviri pachena uye zvinofanirwa kuombererwa, kwete kusekwa nemunhu asingazivikanwe anotya kupa zita chairo kana email kero chaiyo.
Aug 17, 2016 pa 11: 11 AM
Chero vamwe vatengi veCert pano vachiona kuvharika paReturn Path vanobatana? Uye nekuda kwekubuda pachena, Douglas! Yeuka, hapana chakanaka chisingarangwi. 😉
Aug 17, 2016 pa 11: 45 AM
Douglas, ndinokutendai nechinyorwa; Ndinobvuma kuti zvakakosha kuziva nezvesarudzo dzako paunosarudza wekusvitsana naye. Ndine hanya, zvisinei, kuti hauna kukwanisa kuratidza nzvimbo isina rusaruro mukuenzanisa kwako sezvo iwe uine hukama hwehunyanzvi uye hwemunhu ne250ok, sezvakataurwa mukuburitswa kwako. Ndakacherechedzawo mibvunzo yakati wandei mukati meongororo yako yeReturn Path, uye ndaodzwa mwoyo kuti hauna kusvika kwatiri kuti tibatsire kuzadza iwo maburi. Semaneja wekutengesa chigadzirwa kune yedu Email Optimization mhinduro, ndingadai ndakave - uye ndichiri - ndinofara kukubatsira kupindura iyo mibvunzo.
Kuti upindure mumwe wemibvunzo yako - hongu, nhengo dzeConsumer Network yedu dzakapa mvumo kuReturn Path kuti vawane mashandisiro ebhokisi retsamba uye data rekuita. Ndiri kufara kukupa rumwe ruzivo nezve izvi kana uchida.
PaReturn Path, isu tinodada zvakanyanya neiyo yakasarudzika data yatinayo inopa simba mhinduro dzedu uye ruzivo rwunopihwa nevatengi vedu. Isu tinoziva kuti ruzivo rwunofambiswa nedata rwakakosha kuti email yekushambadzira chirongwa chibudirire, uye zvakakosha kuti vatengesi vari kuita sarudzo zvichienderana nedata kubva kune avo chaivo vanyoreri. Isu tine chivimbo mukutaura kuti vatengesi veemail vanoda zvechokwadi kukura yavo email chirongwa uye kuona yakagadziridzwa ROI kubva email vanozobatsirwa nekubatana neReturn Path. Sezvawataura, isu tine data, hukama hweindasitiri, uye ruzivo rweemail ruzivo runogona kubatsira vatengesi kuti vawedzere mari yavo kubva kuemail nekuwedzera maemail avo, kuvaka hukama hwevanyoreri huri nani, uye nekugadzirisa maemail avo kuti avandudze kuita.
Aug 17, 2016 pa 11: 52 AM
Ndatenda nekutora nguva yekusvika. Pasina kupokana kwehupamhi, kusvika, uye nzira iyo Return Path yakapisa muindasitiri yekuburitsa. Ndatenda nekujekesa nyaya yekuwana data zvakare.
Makwikwi anogara akanaka, uye takashandisa 250ok's toolset kune yedu ESP, isu takafadzwa chose nemhedzisiro. Saka ini ndiri shamwari uye ivo vanotsigira, isu tiri mutengi uye mushandisi wepuratifomu yavo. Iyo mhinduro yepuratifomu haina rusaruro zvachose - ini handingaite kurudziro yepuratifomu yandisina kushandisa kekutanga-ruoko.
Zvita 5, 2016 na12:02 PM
Senyanzvi yekudyara muFrance, ndinoshamisika kuti iwe unokurudzira RP kunatsiridza kuwedzera kuita paOrange. Orange usashandise RP Certification.
Dec 6, 2016 pa 4: 21 AM
Hongu vanoita: https://blog.returnpath.com/orange-partners-with-return-path-to-maximise-its-subscribers-email-experience/
Zvita 18, 2017 na2:05 PM
Ndiri kuda kuziva nezve kuenzanisa kwemitengo zvakare. Ini parizvino ndinoshandisa 250ok izvozvi, asi ndiri kuzeza kuenda kuburikidza nedemo maitiro ndisingambozive imwe hama yemutengo wekuenzanisa pakati pe250ok uye nzira yekudzoka.